လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်(၁၉) သို့မဟုတ် ... အရုဏ်တက်လေ ညဉ့်နက်လေ
ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်(၁၉) သို့မဟုတ် ... အရုဏ်တက်လေ ညဉ့်နက်လေ
Labels: သိသမျှ, အမြင်များ
မိသားစု တစ်စုမှာ မိဘပြီးရင် အကြီင်္းဆုံးက မိသားစုအတွက် တာဝန်အကြီးဆုံးမဟုတ်ပါလား။ မိဘမရှိရင် ဒီမိသားစုမှာ အကြီးဆုံးက လက်လွှဲတာဝန်ယူရပြီ။ မိဘ ရှိနေသေးတယ်ပဲထားဦး အကြီးဆုံးက ရုန်းကန်နေရတာ အများကြီးပါ။ မိဘတွေ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း မိဘနေရာမှာ ၀င်ရောက် အစားထိုးပြီး အငယ်တွေရဲ့ တာဝန်ကို ယူရတဲ့အခါ အစစအရာရာ အကြီးဆုံးက တာဝန်ယူရတော့မယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို သိတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို တာဝန်ယူရတဲ့အခါမှာ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို ရှာကျွေးမလဲ၊ ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ၊ ဘယ်လို ဘဝကို ရုန်းကန်ပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မလဲ။ အငယ်တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ ကျောင်းစရိတ်တွေအတွက် ရှာရတော့မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းတစ်ခုတက်ရုံနဲ့မရတော့ဘူး၊ ကျူရှင်စရိတ်တွေကအစ သူများနဲ့တန်းတူ တက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးရမယ်။ တကယ့်ကို ခက်ခဲလှပါတယ်။
ဒီလို မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရှိသမျှသွေးစုပ်ယူဖို့ ၊ ကာမသိုက်တူးဖို့ ယုတ်မာသူတွေကလည်း အမြဲတမ်း ချောင်းနေကြပါတယ်။ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်း ယူချင်သူတွေက အများသား။ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလာချိန်မှာ မိမိရဲ့ ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီး ရှာကျွေးရတဲ့အထိ လုပ်နေကြရပါပြီ။ အင်မတန်မှကို ၀မ်းနည်း ကြေကွဲဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ ကာရာအိုကေဆိုင်ရောက်ကုန်တယ်၊ ဘီယာဆိုင်ရောက်ကုန်တယ်၊ နောက်ဆုံး ညငှက်ဘဝနဲ့ပါ ကျင်လည်ကြရတယ်။ ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ်စားရအောင် ဘွဲ့ရတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ထားဦး မြန်မာပြည်မှာ ဘွဲ့ရတစ်ယောက် အလုပ်ကောင်းကောင်း ရပါရဲ့လား။ ဒီလိုပဲ ဘဝများစွာအတွက် ဘဝတစ်ခုကို ရင်းကြရတယ်။ ဘဝများစွာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ သိက္ခာ၊ မာန၊ ရှိသမျှအရာအားလုံးကို ခြေစုံမှာဝပ်ရင်း စတေးနေကြရတယ်။ အကြီးဆုံးတွေကိုပဲ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြား အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရုန်းကန်နေကြရပြီး ငွေကြေးအတွက် ဒီလိုလုပ်နေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ မြန်မာပြည်မှာ များသထက် များလာပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို မဖြစ်အောင် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်အရှိဆုံးလဲ။ အဓိကကတော့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုတွေ၊ လာဘ်စားမှုတွေ၊ ဒီဒဏ်တွေကို မခံနိုင်တော့တဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းကောင်း ဒီလိုဘဝမျိုးကို ရောက်ကုန်ကြရပါတယ်။
ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို ချစ်ဖို့၊ ချစ်ရဲတဲ့သတ္တိ၊ လက်ထပ်ယူရဲတဲ့ ယောကျ်ားလေးတွေရဲ့အချစ်ကို လေးစားမိပါတယ်။ ကာမတစ်ခုတည်းကို ဦးစားမပေးတဲ့အချစ်၊ နားလည်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ချစ်ကြတဲ့ အချစ်စစ်ကို တကယ်ကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
ဒီလို ဘဝများစွာအတွက် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်းပြီး ရှာကျွေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးထဲမှာ မငြိမ်းအေးလည်း ပါခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဘဝအကြောင်းကို ဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်လမ်းရေးပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲစရာကောင်းလှတဲ့ ဘဝလေးပါ။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ အကြမ်းအတမ်းပေါင်းများစွာကို ကူးဖြတ် ကြိုစားခဲ့ရသူတစ်ဦးပါ။ သူ့အတွက် မျှဝေရိုက်ကူးခဲ့သူအားလုံးကို ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တကယ့့်ဘဝတစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဟာ တော်တော်များများကို ကိုယ်စား ပြုနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီလိုရိုက်ကူမှုမျိုးကို အမြဲတမ်း ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။ ကြိုဆိုထိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲကနေ မှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်။
စိတ်ထားလှပေမယ့် ဘဝမလှခဲ့ရှာသော မငြိမ်းအေး .. ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ မကြံုတွေ့ပါစေနဲ့၊ မြန်မာပြည်မှ ဤကဲ့သို့ ကြံုတွေ့နေရသူတွေ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ ကြံုတွေ့နေရသူတွေလည်း လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ ........... ဆန္ဒများစွာဖြင့် (မှတ်တမ်းတင်သူ)
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, September 15, 2008
thonn thonn said...
ဒါဆို ဒီအခွေက ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ့နော်။
September 16, 2008 at 10:06:00 AM GMT+6:30
ဟုတ်ပါတယ် ညီမ..။ ဒါဟာ တကယ့် ၀မ်းနည်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုမျိုး ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ များသထက် များလာနေပါပြီ ။
September 16, 2008 at 11:07:00 AM GMT+6:30
September 16, 2008 at 11:26:00 AM GMT+6:30
အကိုရေ .. ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည်လိုက်အုံးမယ်. မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ များသထက်များလာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲဗျာ။
September 16, 2008 at 12:58:00 PM GMT+6:30
ဟုတ်ပါတယ်ညီမလဲ ကြားဖူးပါတယ် အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကိုလေ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားလာမှု၊ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေရဲ့ တိုုက်စားမှုကိုုဘယ်ခံနိုင်မလဲ ကြာလာတော့ လူတယောက်ရဲ့အရှက်ကိုဝမ်းရေးက ဖုံးသွားတာပေါ့လေ... ဒါပေမဲ့တချို့မိန်းကလေးကျတော့လဲ အိမ်ကလဲအဆင်ပြေတယ် သူကိုယ်တိုင်ကဝတ်ချင်၊ စားချင်၊ ခေတ်မှီချင်တော့ ဒီလိုဘဝမျိုးထဲကိုခုန်ဆင်းသွားတာလဲရှိပါတယ် နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှယှဉ်လို့မရနိုင်ဘူး မမှီနိုင်ပါဘူး ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုချစ်ရဲတဲ့သူကိုလဲ ကယ်တင်ရှင်လို့ပဲခေါ်မလား၊ လူစွမ်းကောင်းလို့ပဲပြောရမလား အင်း... ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာက ပြောမဲ့၊ လက်ညှိုးထိုးမဲ့သူတွေ၊ ဟားတိုက်မယ့်သူတွေကများတယ်လေ သူကလဲတကယ့်သူရဲကောင်းပါပဲ
ကဲ ကိုလင်းဦးဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
September 16, 2008 at 8:04:00 PM GMT+6:30
September 16, 2008 at 11:06:00 PM GMT+6:30
လိုအပ်မှုနဲ့ တတ်နိုင်မှုဟာ ဘက်မမျှခဲ့ရင်
ကျရာနေရာမှာ ၀င်သရုပ်ဆောင် နေကြတဲ့
ကျနော်တို့ ဇါတ်ဆောင်တွေမှာ ......
September 17, 2008 at 8:58:00 AM GMT+6:30
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကြည့်ပါအုံးမယ်။
September 17, 2008 at 2:04:00 PM GMT+6:30
စိတ်မကောင်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
တစ်ယောက်စီက တစ်ယောက်စီကို ကယ်တင်ရုံနဲ့ ပြီးနိုင်တဲ့ ပြဿနာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။
လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုကူညီလို့ ရမလဲ . . . သိချင်လိုက်တာ။
September 21, 2008 at 9:49:00 AM GMT+6:30
၀မ်းနည်းဖွယ်တွေပါပဲ ကိုလင်းဦးရေ.. တစ်ကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာတွေပါပဲ။ အဲဒီလို အဖြစ်တွေ မဖြစ်အောင် ကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။
September 21, 2008 at 10:27:00 PM GMT+6:30
Han Thit Nyeim said...
ဒါမျိုး ဖြစ်ရပ်က နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတာပဲ။ အဲ... ဒါပေမယ့် အရေအတွက် နည်းသလား၊ များသလားဆိုတာတော့ စဉ်းစားသင့်လှသဗျို့။
September 22, 2008 at 10:16:00 AM GMT+6:30
September 22, 2008 at 1:18:00 PM GMT+6:30
မိန်းကလေးတွေဒီလိုဖြစ်လာပင်မဲ့ ခုခေတ်မှာ ယောကျင်္ားလေးတွေလဲ သိုက်တူးလာကြပြီ... ဒီလိုမျိုးကိုနားလည်ပြီးချစ်ပေးနိုင်မဲ့ယောကျင်္ားကရော ဇာတ်လမ်းအရလား.. အပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တာလား.. တွေးမိတယ်.. ဒီခေတ်မှာယောကျင်္ားတွေက မိန်းမတွေထက်ပိုတွက်လာနေသလိုပဲ.. မဗေဒါအထင်ပါ.. ဘယ်သူကို့မှမတိုက်ခိုက်လိုပါ... မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲ ကြိုက်သလိုသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်.. ကိုလင်းဦး အညွန်းကောင်းလို့ မြန်မာကားမကြည့်တဲ့ကျမ ဒီကားတော့ အချိန်ရရင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်...
October 8, 2008 at 2:07:00 PM GMT+6:30
ကြားနေရတာတွေတော့ အများကြီးပါပဲ .. ရိုးလည်းမရိုးနိုင်ဘူး .. စိတ်လည်းမကောင်းဘူး ..
January 13, 2009 at 11:05:00 AM GMT+6:30
ညီမလည်း ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်မိပြီး အားအင်တွေတောင်ကုန်ခမ်းသွားသလိုခံစားရတယ်. အရမ်းကိုကြေကွဲရတာတွေပါ. အားလုံးရဲ့တာဝန်လို့သဘောထားပြီး စုပေါင်းဖြေရှင်းကြတာပေါ့..ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကိုသိချင်ပါတယ်.
စာရေးသူ ကိုလည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်မိပါတယ်. များသောအားဖြင့် ယောကျ်ားလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကိုဖြူစင်သန့်ရှင်းနေမှလို့ သိထားရတာ. အကိုပြောပြသလိုဆိုရင် အရမ်းကိုစိတ်ဓာတ်အင်အားပြည့်ဝပြီး သူများလက်ညှိုးထိုးတာကို နောက်မတွန့်ဘဲနဲ့ချစ်ရဲတဲ့သတ္တိတွေရှိမှဖြစ်မှာနော်.?
March 12, 2009 at 2:03:00 PM GMT+6:30
၀တ္ထုတိုများ တင်ပြခြင်း () ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း () ၂၀၀၈ ကိုကြိုဆိုခြင်း () arsenal () movie () NUG () Poem () Tag () video () ကဗျာများ () ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်များ () ကြေငြာခြင်း () ကာတွန်းများ () ဘဝထဲက အစိတ်အပိုင်းများ () ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ () မျှ​ဝေ () သတင်းများ () သိသမျှ () အမြင်များ ()